Panthenol, Polyquaternium, Pvp Polymer, akora fikarakarana manokana - Y&R
Y & R, voasoratra anarana ao amin'ny faritra fivarotana varotra any Tianjin (FTZ), nalamina indray ny orinasa avy amin'ny Kingchem International Ltd izay natsangana voalohany tamin'ny taona 2012. , mpanelanelana sy solvents ho an'ny fikolokoloana tarehy / fikolokoloana manokana, fanafody, sakafo, H & I ary indostria Hi-Tech hafa.
Izahay dia mikatsaka mandrakariva ny 'Mutural Trust & Sharing, Mutual fiaraha-miasa & tombontsoa', ary manao ny ezaka izahay amin'ny famoahana vokatra miavaka, serivisy ho an'ireo mpiara-miasa aminay.
Izahay dia mifantoka amin'ny famokarana sy famatsiana otrikaina, PVP Polymers ary solvents / mpanelanelana miorina amin'ny Pyrrolidone, Copolymers PVM / MA, dipalmite Acid Kojic sns.
Y & R (YNR) dia manolo-tena mandrakariva amin'ny fampiharana ny paikadin'ny fampandrosoana azo tratrarina, mifantoka amin'ny firindran'ny olombelona sy ny natiora amin'ny fiezahana hamorona fomba mandroso sivilizasiona.
Valiny sy serivisy
Y & R, voasoratra anarana ao amin'ny faritra fivarotana varotra any Tianjin ...
Voalamina indray ny orinasa avy amin'ny Kingchem International Ltd izay natsangana voalohany tamin'ny 2012.
New Type Polyquaternium -11 Grandly Launchhed Ny fifanakalozana Polyquaternium-11 dia miaraka amin'ny atiny 20% matanjaka manana lanjan'ny molekiola avo kokoa. Mba hamaliana ny filan'ny tsena dia mampiditra Polyquaternium-11 50% izahay. Polyquaternium-11 dia sira amonium quaternary polymeric noforonin'ny fihetsiky ny diethyl ...
Tolotra manokana ho an'ny vovoka DL-Panthenol
Manolotra vidiny manokana izahay ho an'ny DL-Panthenol Powder USP Grade mandritra ny Sep.01,2020 ka hatramin'ny Sep.30,2020. Hahazo valiny haingana ianao miaraka amin'ny antsipiriany raha vao mandefa fangatahana any aminay ianao. DL-Panthenol dia humectants tsara, miaraka amin'ny endrika vovoka fotsy, mety levona anaty rano, alikaola, glycol propylene.DL-Panthen ...